दल खोल्दैमा बन्छ त नेपाल ? - kakhasamachar
कखसमाचार	काठमाडौं	असार ८, २०७९
सफलता बोगटी- निर्वाचन आयोग नेपालमा आज सम्म नेपाल ११२ वटा राजनैतिक दलहरु विधिवत दर्ता भएका छन । रवि लामिछानेको पाटी दर्ता भएपछि ११३ वटा राजनैतिक दलहरु बन्ने छन ।
राजनैतिक दल दर्ता गर्न ५०० जना नागरीकहरुको हस्ताक्षर चाहिन्छ । यसका साथै पार्टीको विधान, घोषणा पत्र, नियमावलि र आचार संहिता पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २४ मा निर्वाचन आयोगको व्याख्या गरएिको छ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति देखि स्थानीय निकायहरुका जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन गराउदछ ।
नेपालका संघीय प्रतिनिधि सभामा २७५ जना सदस्यहरु निर्वाचित हुनेछन । जस मध्ये १६५ जनाको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनेछ भने ११० जना समानुपातिक मतद्धारा निर्वाचित हुनेछन । संसारको एउटा मात्र देश हो दक्षिण अफ्रिका जहाँ सबै सदस्यहरु समानुपातिक निर्वाचनद्धारा मात्र निर्वाचित हुन्छन । नेपालको समानुपातिकमा सबै दलहरुले आफ्ना नातागोता, कमानुपातिक, पाटीलाइ सहयोग गरेको समानुपातिकमा परेको, नेताका वरीपरी भन्कने मान्छेहरु आदि छनौटमा पर्छन ।
अमेरीकामा २ वटा दलहरु मात्र छन डेमोक्रेटीक र रीपब्लिक भने बेलायतमा लेवर, कन्जरभेटिभ र सन १९८८ देखि लिवरल दल पनि अस्तित्वमा छ । चिनमा एउटा मात्र पाटी छ कम्युनिष्ट पाटी अफ चाइना । भारतमा विजेपीको पक्षमा National Democratic Alliance (NDI), छ भने भारतिय कंग्रेसको पक्षमा United Progressive Alliance (UPA) छ । यी यी विजेपी र कंगे्रसको दुइ समुहलाइ महागठबन्धन पनि भनिन्छ । नेपालमा पनि नेका, समाजवादी, माओवादी केन्द्र, जसपाको एकातिर गठबन्धन छ भने नेकपा एमालेको अर्काे गठबन्धन छ तर यसलाइ बुझ्न झापाका स्थानीय निकायहरुको कलवलगुढी र दमकको निर्वाचन हेर्नुपर्ने हुन्छ ।
आखिरीमा जुनसुकै दल भए पनि नेपालको विकास गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । नयाँ दल बनाउदैमा विकास हुन्छ भन्ने छैन । विकास हुन त जनताहरुमा विकासात्मक रणनीतिका विचारहरु दिमागमा भरीदिनु पर्छ । नयाँपाटी खोल्दैमा विकास हुने भए त ११२ पाटीहरु छदै थिए । तर अमेरीकामा २ र बेलायतमा ३ वटा पाटीहरुले अति नै बिकास गरेका छन त ।
मेरो विचारमा नयाँ पाटी त खोल्नु पर्छ तर त्यो आम नागरिकहरुको जिवन पद्धति जिवन शैलि र जिवन स्त्तरलाइ विश्व स्त्तरको बनाउन जनताहरुको जनताहरुद्धारा जनताहरुका लागि हुनुपर्छ । सिंगापुरमा एउटै पार्टी पिपल एक्सन पाटीले सिगापुर बनायो नेपालमा ११३ वटा पाटीहरुले पनि नेपाल बनाउन सकेनन् किन होला ?
८ असार २०७९, बुधवार १०:४६ बजे प्रकाशित
प्रेस चौतारीका अध्यक्षसहित सात पत्रकारलाई काउन्सिलको पत्र
धनिहरुको सम्पतिको लोभ